အမေရိကန်နှင့် ကုန်သွယ်ရေး ဆွေးနွေးပွဲများအတွက် တရုတ်နိုင်ငံက စိတ်ဝင်စားမှု မရှိတော့ကြောင်? - Yangon Media Group
ယင်းနောက်အဆိုပါ ဆောင်း ပါးကိုနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာ ဆင်ဟွာသတင်းဌာနနှင့် ကွန်မြူနစ်ပါတီ ကိုယ်စားပြု People’s Daily တို့ ကထပ်ဆင့်ဖော်ပြခဲ့သည်။ အမေ ရိကန်နိုင်ငံသည် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှု များကိုဆက်လက် လုပ်ဆောင်လိုကြောင်း ပြောဆိုနေသော်လည်း လက်ရှိအချိန်တွင် ပတ်ဝန်းကျင် ကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့် လိမ်ဆင်အနည်းငယ်ကို ကစား နေကြောင်းဖော်ပြထားပြီး တရုတ် နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီး ဟွာဝေးကို ဟန့်တားထိန်းချုပ်မည့် သမ္မတထ ရန့်၏ကြိုးပမ်းချက်ကို ကိုးကား ပြောဆိုခဲ့သည်။
ယင်းဘလော့ဂ်တွင် ”အမေရိ ကန်နိုင်ငံဟာ ဆွေးနွေးမှုကို ရှေ့တိုးလုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာ တည် တံ့ခိုင်မြဲတဲ့ စိတ်ရင်းရှိတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့မတွေ့ရပါဘူး။ ဒါ ထက်အထူးဖိအားပိုပေးလာပါတယ်။ တကယ်လို့သာ တရုတ်ပြည်သူ တွေရဲ့ဆန္ဒကို အမေရိကန်က လျစ်လျူရှုမယ်ဆိုရင် တရုတ်ဘက် ကနေလည်း အကျိုးဖြစ်ထွန်းမယ့် တုံ့ပြန်ချက်ထွက်ပေါ်လာမှာ မ ဟုတ်ပါဘူး”ဟု ရေးသားဖော်ပြ ထားသည်။ အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးစတီဗင်မနူချင်က အမေ ရိကန်အရာရှိများအနေဖြင့် ကုန်သွယ်ရေးဆွေးနွေးမှုများ ရှေ့ဆက် လုပ်ဆောင်ရန် မကြာမီအနာဂတ် ကာလတွင်ပေကျင်းသို့ သွားရောက် နိုင်ခြေရှိသည်ဟု ယခုသီတင်းပတ် တွင်ပြောကြားခဲ့ပြီး ယင်းနောက် ပိုင်း၌ ၎င်းအနေဖြင့် တရုတ်သို့ သွားရောက်ရန် စီစဉ်ထားခြင်း မရှိသေးကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
'သန့်ရှင်းသော အိန္ဒိယ'အဖြစ် ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီ ကြွေးကြော် တည်ဆောက်ခဲ့သော်လည်း ညစ်ပတ်နေသော အိ?
လေ့လာမှုတွေ လုပ်ခဲ့တာဆိုတော့ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းပညာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ မသင်ပေးရဘူးဆိုတဲ့ – မြေ